PayStand: Nabata Kaadị E Si Nweta na Enweghị Nogwọ azụmahịa | Martech Zone
PayStand: Nabata kaadị akwụmụgwọ na enweghị ụgwọ azụmahịa
Mgbe m jikọtara sistemụ akwụkwọ ọnụahịa anyị na nhazi kaadị kredit, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu na otu o siri sie ike na ego ole ha na-ewepụta na azụmaahịa. Mgbe ahụ, m juru m anya na m ga-enweta abụọ sistemụ processor a kaadị akwụmụgwọ processor na a na-ere ahịa na akaụntụ. Nanị uru m nwere bụ na enwere m ike ịme ya na akụ m - mana n'ezie ha kwụgidere ego maka ụbọchị ole na ole iji nwekwuo ọnụego ọmụrụ nwa ha. Ug.
PayStand na nso nso a malitere ma nwee ike igbanwe ulo oru. Paystand na-enye gị ohere ịnweta ego na weebụsaịtị na netwọkụ mmekọrịta gị -enweghị extra software, nzuzo ma ọ bụ na-achọ a na-azụ ahịa na akaụntụ. Nabata Kaadị E Si Nweta, eCheck, na eCash niile enweghị ụgwọ azụmahịa maka nzukọ gị.
PayStand gụnyere atụmatụ ndị a:
Wuru na-Mobile nrụọrụ - Nhazi ọ bụla na-agụnye ahụmịhe mkpanaka pụrụ iche nke kwekọrọ n'ụdị nke PayStand gị, yabụ ọdịnaya gị ga-adị mma na ngwaọrụ ọ bụla, oge ọ bụla.
Njikọ Smart - Ihe ọ bụla imepụtara na - enye gị njikọ nke ịmara n’ime ya n’amaghị ama. Kekọrịta njikọ gị mara mma na Facebook, Pinterest, Twitter, Email, ma ọ bụ gafee weebụ.
Nlekọta Iwu - soro iwu, zaghachi ndị ahịa, zipụ akwụkwọ ọnụahịa ndị akpọrọ akara ọcha, ngwongwo egwu, ozi mbufe na ozi ndị ọzọ.
Otutu Ulo ahia - tinye PayStand gị na weebụsaịtị gị, PayStand Webpage gị, Facebook, Tumblr, WordPress ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ. PayStand jikwaa iwu gị niile n'otu ebe, si na ụlọ ahịa gị niile.
Otutu ihe di iche - nye otutu ụdị ihe niile site na katalọgụ peeji gị. Ree ma zipu ihe anụ ahụ, bulite ihe dijitalụ maka ọrịre, were ụgwọ, ma ọ bụ nara onyinye.
Ụlọ ahịa WebStand n'efu - onye ọrụ ọ bụla PayStand na-enweta PayStand ntanetị WebStand na ntanetị na adreesị url pụrụ iche.
Zụta ugbu a bọtịnụ & Ebe nrụọrụ weebụ Embeds - dinggbakwunye Zụta ugbu a bọtịnụ ma ọ bụ itinye PayStand gị na saịtị gị dị mfe dị ka idobe vidiyo Youtube.
Nabatara Image Loader - PayStand na-enye ohere ọtụtụ onyonyo kwa ihe enyere ma na - ewepụta ọtụtụ ụdị nke ụdị faịlụ ọ bụla ebugoro. Ihe oyiyi anyị na-achọpụta ma họrọ nha onyogho kwesiri iji kwado maka ngwaọrụ na ihuenyo ọ bụla - gụnyere ngwaọrụ Apple nwere Retina Ngosipụta.
Social Links - Na-akpaghị aka na-egosipụta mmekọrịta netwọk mmekọrịta na ihe ọ bụla e kere eke, na-eme ka ndị ọbịa gị kerịta ma kwuo banyere gị na netwọkụ ọ bụla. Ndị ahịa gị nwedịrị ike dị ka ị na share site na ego ha.
Direct Facebook Page mwekota - PayStand na-enye gị a Facebook Ngwa na integrates na gị Facebook peeji nke. Ndị ahịa gị zụrụ na Facebook na-enweghị ịhapụ ibe gị (nke na-enyere aka igbochi ọnwụ nke ahịa).
Ọtụtụ Variants - hazie ihe, ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ onyinye dị iche iche dịka nha, agba, ụdị, ma ọ bụ ego. PayStand na-enye gị ohere ịtọ ọnụahịa na akara ndekọ maka ụdị ọdịiche gị ọ bụla.
Universal Posting / Sharing - Jiri PayStand's Universal Posting ngwá ọrụ iji kesaa ihe gị ngwa ngwa na ntanetị mmekọrịta ọ bụla na ọwa nkwukọrịta n'otu oge. Otutu ebe ị noo karie ka ndi na ege gi.
Ngwọta Otu Niile - ihe niile ịchọrọ ịkwụ ụgwọ ma ree n'ịntanetị. Ihe niile gụnyere. Enweghị akaụntụ nnabata ndị ọzọ, ndị na-akwụ ụgwọ ego, akaụntụ ndị ahịa, ndị na-emepụta weebụ, ndị mmemme, ngwanrọ njikwa, ma ọ bụ isi ọwụwa ndị ọzọ dị mkpa!
Nkwalite vidiyo - tinye vidiyo n'ime nkọwapụta ndepụta ihe gị site na iji Youtube ma ọ bụ Vimeo itinye koodu.
Akpaghị aka na-anabata Designs - Akwụkwọ PayStand niile na-anabata ma na-arụ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla, iPads, ma ọ bụ nha ihuenyo kọmputa na mkpebi.
Nkọwapụta Ihe Ndị Ahịa tinye nkọwa nkọwa ga-enye gị ohere ịhazi ụdị edemede gị, ihe ndozi ederede, onyonyo, njikọta, vidiyo na ndị ọzọ.
Direct Communication na Ahịa - PayStand na-enye gị adreesị email na adreesị mbupu ka ị wee zụọ ndị ahịa gị.
Otutu Onye Nkwado Nkwado - Kwado ọtụtụ ndị mmadụ iji nyere aka mange ma na-agba ọsọ na akaụntụ PayStand ọ bụla.
Tags: ihe nlere kaadị akwụmụgwọakwụ ụgwọụgwọ azụmahịapasent efu
MassiveImpact: ọnụ ahịa otu netwọkụ mgbasa ozi ekwentị
Smartcards na-agagharị n'ime afọ ole na ole sochirinụ
Ahụrụ m nke a n'anya, Doug! M ga-eme nyocha ya n'ihu n'ihi na nke a bụ otu n'ime ihe ikpeazụ m kwere ka m kwụsịlata ịmalite ntanetị. Ị bụ ọkachamma!
Enwere ike iji nke a bulie onyinye maka mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị?